I-Romantic Tower yadibana ne-1200 - I-Airbnb
I-Romantic Tower yadibana ne-1200
Indawo yokuhlala "i-Il Torrino" yindlu enepanoramic efunyenwe kwindawo yokutyela yenqaba yakudala ekwimida yedolophu yakudala iMonticchiello. Indawo yokuhlala inombono ongakholelekiyo kwiVal d'Orcia. Awukwazi ukucinga ...
Ipanoramic suite efunyenwe kwindawo yokutyela yenqaba yakudala ekwimida yedolophu yamaxesha aphakathi iMonticchiello. Kufuphi nokufikelela kwinqununu kwilali, kuhlaziywe ngokupheleleyo ngumnini ngencasa kunye nokhathalelo olucokisekileyo lweenkcukacha.
Isidlo sakusasa sibandakanyiwe kwindawo yam yokutyela encinci epholileyo
Kwindawo yeendwendwe igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala elinebhedi kunye neTV; igumbi lokuhlambela; umbono wepanorama kwiPienza kunye neVal d'Orcia.
Sisembindini weMonticchiello, (IZIQULATHO EZINGUNDOQO EFIHLILE) yona!
Ndiya kuba kwindawo yam yokutyela ixesha elininzi, ngalo naluphi na ulwazi ndinkqonkqoza nje emnyango :)